Vamwe vanyori vanobva kunzvimbo iri muLa Mancha inonzi La Solana | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Fantasy, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela, Romance novel, Nhetembo, Theater
Mufananidzo we (c) Carlos Díaz-Cano Arévalo. Don Quixote chifananidzo mukutenderera muLa Solana (Ciudad Real).
Solana Iri taundi riri mudunhu reCiudad Real, muLa Mancha zvakanyanya La Mancha, uye musikana wekumusha kwangu. Yakavakirwa mu Munda weMontiel, tine vavakidzani maguta anoyevedza e Villanueva de los Infantes, Valdepeñas kana Tomelloso. Isu tiri zvakare kukanda kweibwe kubva paka yakanaka yepaki yeLas Ruidera lagoons. Mune mamwe mazwi, hatishaye iyo waini yakanaka, chizi yakanakisa, nzvimbo dzekusiyanisa uye hunyanzvi mumakona madiki chiuru emamwe mataundi. Uye kwete kunyanya kunyorwa mazita ekutanga nekuti isu tiri mu nyika yaDon Quixote.
Saka muLa Solana isu tine nezve mangani mazita etsamba huru trajectory uye mukurumbira. Tinorima minda yedu uye zvakare iyo nhetembo, vechidiki uye zvinyorwa zvevana, theatre uye novel. Ini ndichangobva kujoina iri boka rakasarudzwa uye, sezvo ndiri kufara kwazvo, kubva pano ini ndoda kuita mutero mudiki uye hwindo reguta rangu kune nyika yekunyora.
1 Santiago Romero weAvila
3 Luis Romero weAvila
8 Tomi Hairstyle
10 Mamwe mazita
Santiago Romero weAvila
Nyanduri, rake repamusoro basa Kwemakore mazhinji ivo kare vakaita imwe yeiyo zvinyorwa zvepamusoro zvekunyora solaneros. Asi mukurumbira wake unofukidza Spain yese. Anokunda mibairo isingaverengeke, atove pabhuku rake rechishanu rakanzi Iko kudedera kwemufaro uye kusava nemhosva. Ndiyo kuunganidzwa kwekudetemba kwake kwakagadzirwa pamusoro pemakore anopfuura makumi mana. Inosanganisira mabasa ekuhwina mubairo pamwe chete nemamwe akatoburitswa mumabhuku apfuura. Asi mazhinji haana kunyorwa. Kumwe kumwe kubudirira kune iro risingaperi runyorwa uye kuzivikanwa.
Co-inotanga nhengo yebhuku rekunyora Pan de Trigo yeLa Solana kubvira payakasikwa muna 1989, ndiyo iyezvino alderman yenzvimbo yacho. Asi kutsauka kwezvematongerwo enyika uye chinzvimbo chake chinomusiya nguva yebasa rekunyora rakakurumbira.
Izvo zvakare nhengo yeCastilla La Mancha Vanyori Sangano. Akaburitsa mabhuku mazhinji ese ari ega uye nevanyanduri vazhinji nevanyori vezuva vakaita se Nemesio De Lara Guerrero naLuis Romero de Avila. Mamwe mazita ake ari Mune gore rangu rekotoni (1994), Mukutsvaga zita renyu (1998), Tsamba dzerudo kwauri (2001), Kufungidzira kwenguva (2004), Tsamba dzekuda kubva kuToledo (2009) kana Nhetembo dzekurarama mazuva ese (2010). Bhuku rake razvino rakaburitswa ndere Tsamba dzerudo dzaMavi (1992-2017).
Luis Romero weAvila
Akagara achinyora, pamusoro pekumira kunze nekuda kwekuda kwake kuita uye mimhanzi. Izvo zvakare co-muvambi nhengo yeQuintería nePan de Trigo. Akawana zvinopfuura makumi mana ezvinyorwa mibairo uye akaburitsa mabhuku enhetembo: Chipo cheChiedza (1994), Hupenyu Mifananidzo (2004), … Uye zvakare zvigayo zvinorota pamwe chete neshamwari yake Luis Díaz-Cacho Campillo (2008), pakati pevamwe.
Munyori ane nzara, mutori wenhau uye mudetembi Solanero nekutora, Miguel García de Mora Gallego aivewo akakosha mumutsika weSolanera. Gore rino vana vake Gloria naLuis Miguel vakaburitsa Ngano uye ngano dzerudo uye nguva dzose, mubatanidzwa wevakawanda zvinyorwa rakaburitswa nababa vake mukati memakore makumi manomwe nemaviri ehupenyu hwake muLa Solana.
Munyori mudiki uyu Iye murwi wekare atove mumabhuku. Neshungu huru uye chishuwo, akatoburitsa zvikamu zviviri zveimwe trilogy iyo yakakunda vaverengi ve fantasy genre, uye zvakare bhuku renyaya. Uye ane akawanda akamirira mapurojekiti. Iyo trilogy inonzi Iwo mashiripiti epasi maviri uye, ichimirira kupera, muna 2015 chikamu chayo chekutanga chakaburitswa, Girazi maziso, uye gore rapfuura raive rechipiri, Kurota kwakasviba. Y Kufamba-famba kuburikidza... ndizvo cYakagadzirwa pfupi pfupi, nyaya refu uye dzinoverengeka pfupi nyaya pane dzakawanda misoro inofarira munyori.
Mumwe munyori solanero uyo achangobva kuburitsa bhuku. Izvo zvakare nhengo yePan de Trigo, uye kunyora kwake kwagara kwakanangana ne kugadzirwa kwemitambo yerudzi rupi zvarwo: vatambi, mapipi, zvinhu, mamonologue, vanyori venhau kana mitambo yeredhiyo. Akaburitsa komedhi, Maawa mashanu naAmancio, nekugunun'una kuri pachena kubasa raDelibes uye kuti munyori anozvitsanangura se "kutadza kwechinyorwa chekutanga."
Francisco Hergueta, Upenyu hwese anosimudzira uye muverengi anoshingairira uye anofarira fungidziro genre, akafunga kunyora zvake nyaya uye izvozvi kuburitsa yeakanakisa enhoroondo, fungidziro uye yekushamisira inova. Iko kufarira uye kuravira kwakamutungamira kuti aumbe imwe yeaya mavara ayo anowanzo batanidza vanoda vejairo, Pirate Ernesto Sacromonte. Kuuya kwake muzana ramakore rechi XNUMX kunogadziridzwa mumabhuku maviri ane musoro unoti Ndinopika kuvimbika kwamuri y Ndinopika kutsiva, Nemusoro wenyaya weThe ngano yaErnesto Sacromonte.
Uyu Madrilenian nekuzvarwa asi solanera zveupenyu hwese ndizvo Chirungu philologist uye akahwina mubairo wake wekutanga wenyika kurondedzero aine makore gumi nemanomwe. Uye munguva pfupi yapfuura yakapa piyona nyaya yevana, mitauro miviri, inoratidzwa naIsabel Carmona uye nehunyanzvi hwe augmented reality titled Kusangana (Kusangana kwacho). Icho chakanangana nevana ve pakati pemakore makumi maviri nemashanu kusvika makumi mana nepfumbamwe uye inopa mukana wekuteerera zvinyorwa mumitauro miviri neimwe nzira.
Oui, c'est moi uye ini ndangosvika kune ino kirabhu yevanyori ve solaneros. Ini ndinotanga zvangu kunyorwa pasi nerunyorwa rwekutanga rwavanondishambadza Marie. Asi kune vamwe vakawanda izvo zvakamirira. Spelling uye dhizaini kuverenga kuverenga pamwe nemuturikiri uye neruzivo rwekugadzirisa, ndinonyora sevamwe vakawanda kubva paudiki. Iyo Kurohwa kwerombo zvairevei Marie iko zvakare kunyepedzera kwemumwe munhu uyo, kunyangwe makore mazhinji achinyora, zvinoita kunge achangotanga.
Nekuti kune vamwe vakawanda vakaita saiye munyori wenhoroondo weLa Solana, munyori wenhoroondo uye mutori wenhau Paulino Sánchez, yese yemuno institution iyo yakaenda pamudyandigere gore rino. Naivowo munyori mudiki Julián Simón, iyo ichangobva kuratidzwa Gomo reMediterranean, chikumbiro nezve hupfumi hwepanyama hwakatikomberedza. Kana nyanduri ane mukurumbira Isabella del rey, nebhuku rake razvino rakanzi Mavhesi echikoro.
Zvichida ndakasiya zvimwe uye ndinokumbira ruregerero nezvazvo. Ndiri kutarisira kuramba ndichinyora zvinyorwa nezvevanyori vezuva ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Vamwe vanyori vanobva kunzvimbo iri muLa Mancha inonzi La Solana
Kubvunzana naIsabel Coixet yemufirimu wake uchangoburwa "Raibhurari" yakavakirwa pabhuku naPenelope Fitzgerald
Pazuva rino munyori Noa Gordon akazvarwa